Potato Break @ People | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 3.75 Decoration : 4.42 Service : 3.75
Price Range - 1500 Ks - 8000 Ks
Activities on Potato Break @ People
Htoo Htoo Aung uploadedaphoto at Potato Break @ People5years ago
gineal like Potato Break @ People6years ago
1500 Ks - 8000 Ks
Kyaw Naing like Potato Break @ People6years ago
Ye Naung Kham is eating at Potato Break @ People6years ago
mmfoodie like Potato Break @ People6years ago
Ye Naung Kham reviewed Potato Break @ People6years ago
Pop Corn uploadedaphoto at Potato Break @ People6years ago
Soung Oo reviewed Potato Break @ People7years ago
Meet cheese potato and bule berry soda , I like them very much. I would like to come and try other things again.
Pop Corn reviewed Potato Break @ People7years ago
Potato Breakရဲ့ French Friedတွေကို အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Honey Mustard Friesကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ ဘယ်နှစ်ခါစားစား မရိုးနိုင်တဲ့အရသာပါ။ Chicken Wingsရဲ့ အရသာကလည်း အလွန်အစပ်အဟပ်တည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Chicken Stripsကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကလည်း ငြီးငွေ့မနေစေဘဲ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကလည်း ကောင်းပါတယ်။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ အာလူးကိုသိပ်မကြိုက်သော်လည်း Potato Breakကို ခဏခဏသွားချင်စိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။
Wai Yan Min Zaw reviewed Potato Break @ People7years ago
ဒီဆိုင်စစဖွင့်ချင်းတုန်းက လာစားဖူးတယ်။ တော်တော်ကို မိုက်တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဒီတစ်ခေါက် လာပြီးထက်စားဖြစ်တယ်။ Fries with Wasabi Sauce ရယ်၊ ကြက်တောင်ပံတစ်ပွဲရယ်၊ Americano တစ်ခွက်ရယ် မှာလိုက်တယ်။ ပထမဆုံးပြောချင်တာက Service၊ အရင်ထက် ညံ့သွားပြီ။ ဆိုင်မှာ လူလည်းသိပ်မရှိဘဲနဲ့ အရမ်းကိုကြာတယ်။ Order ကို မိနစ် ၃၀ တောင်စောင့်လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရသာကတော့ မိုက်ပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ကြက်တောင်ပံပဲ။ ရှယ်ကို ဆွဲတာ။ ဟီး။ Potato Break ရယ်၊ Service လေးကို ပြန်ပြီး ထိမ်းပေးပါ။ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
shune le' reviewed Potato Break @ People7years ago
Writeareview for Potato Break @ People
Report for Potato Break @ People
Reserve table at Potato Break @ People